Uluhlu lwee-imeyile UkuCoca kunye neenkonzo zoCoceko: Kutheni ufuna enye kunye nendlela yokukhetha | Martech Zone
Ukuthengisa nge-imeyile ngumdlalo wegazi. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, ekuphela kwento etshintshiweyo nge-imeyile kulungile Abathumeli be-imeyile bayaqhubeka nokufumana isohlwayo ngakumbi nangakumbi ngababoneleli beenkonzo ze-imeyile. Ngelixa ii-ISPs kunye nee-ESPs zinokuququzelela ngokupheleleyo ukuba zifuna njalo, azenzi njalo. Isiphumo kukuba kukho ubudlelwane obunokuchasana phakathi kwezi zimbini. Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi (ii-ISPs) bavimba ababoneleli beenkonzo ze-imeyile (i-ESPs)… emva koko ii-ESP kunyanzelekile ukuba zivimbe abathengi.
Ukuba ngaphezulu kwe-10% ye-imeyile yakho imbi, ngaphantsi kwe-44% ihanjiswa!
Akukho lula njengokungena kabini kumzi mveliso. Iindawo ezifana nezethu zisebenza namaqabane kumaphulo ekwabelwana ngawo nabathengisi kunye nabaxhasi. Asibaniki ukufikelela kuluhlu lwethu, kodwa amaxesha amaninzi siqokelela iidilesi ze-imeyile kunye ukwenza amaphulo. Leyo ibiyintloko ebuhlungu kakhulu. Abanikezeli beenkonzo ze-imeyile abayikhathalelanga indlela yakho ye-optin okanye umkhondo wophicotho-zincwadi lwakho; bathatha nje ukuba ugaxekile.
ESPs ezifana MailChimp basebenzise ubukrelekrele kwiidilesi ze-imeyile kwinkqubo ebizwa Omnivore. Ngo-Omnivore, iMailchimp yathumela izilumkiso ezingama-50,000 45,905 yaze yacima ii-akhawunti ezinobungozi ezingama-XNUMX kunyaka omnye kuphela. Banokukhuthaza inyani yokuba ezo akhawunti zazinobungozi… ndingatsho ukuba uninzi lwazo ziinkampani ezithumela kuluhlu lwabo kwaye zingasebenzisi ezona ndlela zilungileyo.
Ngokutsho koPhando lweJupiter, ngaphezulu kweepesenti ezingama-20 zobhaliso lwe-imeyile iqulethe typos, syntax, domain kunye nezinye iimpazamo. Ukwenza into elula njengokuthumela kuluhlu oludala apho umda othile weedilesi ze-imeyile ezinokubeka umda wabo. Ayinobungozi. Ungayichazanga i-bots phaya etyhala i-SPAM yokubambisa iidilesi ze-imeyile ngokusebenzisa iinkqubo yonke imihla ukuzama ukukubamba. Isimanga, ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ukuba kulula ukuba u-SPAMMER afumane i-imeyile kwibhokisi yakho engenayo kunenkampani ephakathi ethumela umyalezo osemthethweni.
Ababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile abanyanisekanga kakhulu malunga namaxabiso okuhanjiswa kwabo, nokuba. Rhoqo, baya kuyishiya i 99% yenqanaba lokuhanjiswa, kodwa ushicilelo oluncinci luthi emva kwe-imeyile ezimbalwa ezithunyelwayo. Ewe, duh… owokuqala uthumela ukufaka iidilesi ze-imeyile ezingasasebenziyo! Umyinge wokwamkelwa kwenqanaba Inqaku loMthumeli ka-91 ​​okanye ngaphezulu ngama-88%. Ukuba ne-1% yoluhlu lwakho olubi kunokulahla ukuhanjiswa kwakho ngaphezulu kwe-10%!
Ngombulelo, zikhona ukuqinisekiswa kwe-imeyile kunye nohlu lwabanikezeli bezempilo kwimarike eqokelela ubukrelekrele kwaye iya kukunceda ucoce uluhlu lwakho ngaphambi kokubanjwa kule ngxaki. Gcina ukhumbula ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kwe- Ukuqinisekiswa kwe-imeyile xa kuthelekiswa neenkonzo zokuqinisekisa nge-imeyile. Ukuqinisekiswa kwe-imeyile kuqinisekisa ukuba idilesi ye-imeyile yakhiwe ngokufanelekileyo, ngelixa ukuqinisekiswa kwe-imeyile kusetyenziswa iindlela zokuqikelela ukuba kungenzeka ukuhanjiswa.
Kutheni ufuna ukuCocwa kuLuhlu lwe-imeyile?
Ucoceko lwe-imeyile linyathelo eliyimfuneko ekubeni nenkqubo enkulu yokuhanjiswa kwe-imeyile kunye nokugcina igama elihle lomthumeli. Nazi iimeko ezi-4 apho uluhlu lokucoca i-imeyile luyimfuneko:
Ukufuduka -Ukuba uya kumboneleli omtsha, uluhlu lokucoca i-imeyile linyathelo elibalulekileyo kwi Isicwangciso sokufudumala se-IP.
Ubeko lwebhokisi engenayo esezantsi -Iimeyile zakho zinokuya ngqo kwifolda ye-junk kuba uluhlu lwakho lunemigibe emininzi yogaxekile kunye needilesi ze-imeyile ezikhutshwe kuyo.
Amaxabiso aphantsi avulekileyo -Ukuba awulinganisi inqanaba lokubekwa kwebhokisi yakho engenayo kwaye unamaxabiso aphantsi avulekileyo, ii-imeyile zakho zinokuya kwifolda ye-junk ngenxa yemigibe emininzi yogaxekile kunye needilesi ze-imeyile.
Ukuzibandakanya kwakhona -Ukuba unoluhlu ongakhange uluthumele kwiinyanga, uyakufuna ukucoca uluhlu ukuze uthintele ispike kwii-bounces ezinokuthi zichaphazele amazinga akho okuhanjiswa.
Uyikhetha njani iNkonzo yokuCoca uLuhlu lwe-imeyile
Eli phepha liye lathandwa ngokumangalisayo, ke sifuna ukuqinisekisa ukuba sinika isikhokelo ekukhetheni umboneleli kwaye kutheni sihlule olu luhlu lungezantsi kwiinkonzo ezicocekileyo nezingaziwayo zoluhlu lwe-imeyile. Iingcebiso zethu zisekwe koku kulandelayo:
ngokwemiqathango -Ingaba le nkonzo inemigaqo kunye nomgaqo-nkqubo wabucala omiselweyo oqinisekisa ukuba awuthengisi kwakhona okanye ukhuphe iidilesi zakho ze-imeyile kuye nawuphi na umntu wesithathu?
elubala -Inkonzo ebhaliswe ngokuvulekileyo kwi-intanethi kunye neenkcukacha zonxibelelwano kubunini bazo, indawo yeshishini, kunye neenkcukacha zonxibelelwano? Ngaba ishishini liyindawo ebekelwe iofisi (kwaye ayiyiyo i-PO Box okanye iofisi ekwabelwana ngayo)?
inkxaso -Nokuba le nkampani inazo iindlela zonxibelelana nabo nge-imeyile, ifom yoqhakamshelwano, okanye inombolo yomnxeba kwaye ngaba kukho umntu owaphendulayo kwisicelo eso.
Unxibelelaniso Ukucwangciswa kweedilesi ze-imeyile yinto enye, kodwa ukuba ungazidibanisa zonke iinkqubo zakho kunye neendawo zokungena apho uqokelela khona iidilesi ze-imeyile, yinkqubo efanelekileyo kakhulu leyo.
API - banayo i-API ebhalwe kakuhle apho ungadibanisa amaqonga akho ngokuthe ngqo kunye nabo?
ukuthobela -Nokuba le nkampani ihlala elizweni elinemigaqo yabucala efana ne-GDPR okanye i-imeyile yokuthotyelwa kwemithetho yogaxekile.
Uluhlu lwethu lwe-imeyile yokuCoca uMxhasi:
Ukuqinisekisa nge-imeyile, ukuhlalutya kunye noluhlu lokucoca izinto ezenzelwe abantu abafuna isixhobo esikhawulezayo nesithembekileyo ngaphandle kwayo yonke into enokubakho. Amanyathelo amathathu nje alula okwenza uluhlu lwakho.
Kuqinisekisiwe i-98% + inqanaba lokuhanjiswa uluhlu lwakho lwe-imeyile oluqinisekisiweyo.
Iinketho zokukhuphela izintlu zakho ezintsha kunye neengxelo ezikhethekileyo.
24 / 7 yenethiwekhi nabantu bokwenyani kwelinye icala ukunceda.
Ngenisa uluhlu lwakho lwe-imeyile
Ukukhokela uLuhlu lwee-imeyile noCoceko lwaBaboneleli
Nantsi eyokuqinisekisa i-imeyile kunye noluhlu lweenkonzo zempilo. Zonke ezi zibandakanya iqonga le-Intanethi apho kungafuneki ukuba unxibelelane neqela elithengisayo kwaye zonke zinemigaqo yokusetyenziswa kwedatha, ziyabonakala, kwaye ziphendule ngenkuthalo kwizicelo zenkxaso:
Ukusetyenziswa kolu luhlu iinkonzo zempilo zinako phucula ipesenti yee-imeyile eyenza kwibhokisi engenayo, ukunciphisa umngcipheko wokuvalwa ngaBaboneleli ngeeNkonzo ze-Intanethi, kunye ukunciphisa umngcipheko wokugxothwa nguMboneleli weNkonzo ye-imeyile… kufanelekile ukuba utyale imali ukuba unoluhlu oludala okanye uyasebenzisana. Gcina ukhumbula ukuba ngekhe ufikelele kwi-100% ngokuchanekileyo kuluhlu lwakho. Abantu batshintsha imisebenzi kunye nababoneleli rhoqo, belahla iidilesi zabo ze-imeyile ezindala.
Uninzi lwababoneleli bakwanikezela nge API ukuze ukwazi ukuyidibanisa nenkqubo yokufumana kwakho.
Iinqwelomoya -Fumana ii-imeyile zeshishini kunye neenombolo zomnxeba. Banokongezwa chrome nayo.
I-Bouncer -Coca uluhlu lwakho lwe-imeyile kunye nomkhangeli we-imeyile othembekileyo. Ukuqinisekiswa komsebenzisi kwe-imeyile kunye nesixhobo sokucoca uluhlu kukunceda ugcine unxibelelwano kwaye ufikelele kumntu wokwenyani ngokulula nangokukhawuleza.
Qinisekisa -Izixhobo ozifunayo ukususa ii-imeyile ezingasebenziyo kulwazi lwakho lwabathengi, imikhankaso yokuthengisa nge-imeyile, okanye iileta zeendaba ezikwi-Intanethi kwaye uzigcine zilungile. Unokutsala ngokulula kwaye ulahle ifayile, wabelane ngefayile ngelifu, kwaye ufumane ingxelo eneenkcukacha kuluhlu lwakho ngaphandle kokunxibelelana nenkampani. Banayo i- API ukuba ungathanda ukudibanisa ukuqinisekiswa kwe-imeyile kunye nabo!
Ukucoca -Oku kungqinisisa uninzi lwe-imeyile kukuvumela ukuba ulayishe idathabheyisi ye-imeyile kwaye ucoce uluhlu lwakho lwe-imeyile ngonqakrazo olunye.
Ukukhutshwa Inkonzo ye-DeBounce ikuvumela ukuba ulayishe kwaye uqinisekise uluhlu lweedilesi ze-imeyile ngokukhawuleza nangendlela ekhuselekileyo.
Umhloli we-imeyile -Ukuchonga iidilesi ze-imeyile ezingezizo okanye ezingezizo.
Umhloli we-imeyile - (eyahlukileyo ngentla) Umhloli we-imeyile ungomnye woovulindlela bokuqala kwicandelo lokuqinisekisa i-imeyile, enceda ekuphuculeni ukuhanjiswa konxibelelwano lwe-imeyile.
Umgangatho weDatha yamava -Isisombululo sokuqinisekisa nge-imeyile esichonga kwangoko ukuba ingaba idilesi ye-imeyile iyasebenza kwaye iyahanjiswa.
IAdresi entsha inceda iinkampani ezixhomekeke kwi-imeyile ukuqhuba ingeniso ngokwakha, ukuhlaziya, ukwahlula, nokucoca uluhlu lwazo lwe-imeyile.
Ukuhamba ngokungacacangaIqonga lobukrelekrele ledatha lisekwe kwimigaqo eqhutywa ngumgaqo-nkqubo kunye nexesha langempela lokuskena ii-algorithms ezisebenzisa indlela eyahlukeneyo yokuchonga, ukuqinisekisa, nokukhusela kuluhlu olubanzi lwezisongelo ezisekwe kwi-imeyile.
I-Informatica -Khawuleza uqinisekise kwaye uqinisekise iidilesi zemeyile kunye nemimandla ukuqinisekisa ukuchaneka kwayo ngaphambi kokuba uchithe ixesha elingafunekiyo, amandla kunye nemali, ukwandisa ukuhanjiswa komyalezo nge-90%.
Ibhola ekhatywayo -Ibhokisi ekhatywayo iqinisekisa ukuba uthumela ii-imeyile kubasebenzisi bokwenyani kwaye ikunceda ukwahlula iidilesi ezikumgangatho osezantsi kunxibelelwano lwexabiso eliphezulu. Khusela igama lakho, wandise amaxabiso avulekileyo, kwaye ugcine imali ngeKickbox.
Ukujonga ngeposi -Ukuqinisekisa nge-imeyile, uhlalutyo, kunye noluhlu lokucoca olwenzelwe abantu abafuna isixhobo esikhawulezayo nesinokuthenjwa ngaphandle kwako konke ukungqubana kunye nokuphakama. Amanyathelo amathathu nje alula okwenza uluhlu lwakho.
Isigidi seVerifier -Ukuqinisekisa nge-imeyile ngokuchaneka okuphezulu kunye namaxabiso afikelelekayo.
Ungaze isusa iidilesi ze-imeyile ezingasasebenziyo kwaye inciphise ngokumangalisayo amaxabiso onke okufumana unikezelo lokugqibela.
Ubungqina Qinisekisa ngokukhawuleza kwaye uqinisekise uluhlu lwakho lwe-imeyile. Ukhuselo lwaBucala lwe-EU-US luyahambelana.
TheChecker I-1,000's yeengcali ezivela kumazwe angama-80 + zixhomekeke ekuqinisekiseni i-imeyile yethu eninzi kunye neenkonzo zokucoca uluhlu lwe-imeyile.
TowerData Yongeza inqanaba lebhokisi yakho yebhokisi engenayo ngokucoca uluhlu lwakho lwe-imeyile yeedilesi ze-imeyile ezingasebenziyo nezikhohlisayo.
Qinisekisa -Yazi ukuba uthumela i-imeyile i-akhawunti engazukuhlawula. I-Xverify inokuqinisekisa iidilesi ze-imeyile ngexesha langempela kunye nebatch.
Webbula -Ucoceko lwe-imeyile kunye neenkonzo zokuphucula idatha.
Ezinye iiNkonzo zokuNgqinisisa ii-imeyile kwi-Intanethi
Nazi ezinye iinkqubo zokuqinisekisa nge-imeyile kunye nococeko bezingenazo zonke izikhombisi zetrust yeenkampani ezingentla.
Ampliz -I-Ampliz iqinisekisa iidilesi zabathengi bakho ngexesha langempela kwaye ikuncede ugcine ucoceko lwe-imeyile olunikezela ngenqanaba lokuphendula eliphezulu. Le thambeka ikwabhaliswe kwi Ayinangxaki inkonzo. I-Bounceless iyakucoca uluhlu lwakho lwe-imeyile ngokujonga ii-imeyile ezingaqinisekiswanga, imigibe yogaxekile kunye nemimandla enokulahlwa.
Imiboniso bhanyabhanya -I-imeyile yokuQinisekiswa kwe-API yenkonzo yokuhlakula ukhula / iidilesi ze-imeyile zethutyana, ii-imeyile zogaxekile, njl njl, ukugcina uluhlu lwakho lucocekile.
Vimba iiDilesi ze-imeyile ezilahlwayo -Fumanisa kwaye uvimbele ukulahla, ngexesha elinye, ukulahla, iidilesi zethutyana ze-imeyile.
Isiqinisekiso se-imeyile ngobuninzi -Isicelo sewebhu esinokuqinisekisa ukuba idilesi ye-imeyile iyinyani okanye ayiyonyani. Nabani na othumela ii-imeyile rhoqo unokuzuza ngokusebenzisa le nkqubo.
I-CaptainVerify -Jonga kwaye ucoce uluhlu lwakho lokuposa ngokukhawuleza. Tsala kwaye ulahle ifayile yakho kwisixhobo sethu kwaye sikwenza konke okunye. Elula, ekhawulezayo nekhuselekileyo.
UcoceList.com Ukucoca kunye nokuqinisekisa ii-imeyile.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano -Fumana idilesi ye-imeyile yomntu kunye nenombolo yefowuni
UkuQinisekiswa kweDatha -Vumela uluhlu lwakho lwe-imeyile ngokukhawuleza. Ikhonkco kwi-Mailchimp okanye Qha ga mshelwano ingxelo ngokubeka esweni okuqhubekekayo nokugcinwa koluhlu.
Ummeli we-imeyile -I-imeyile ephawulayo ikunceda ekucoceni ii-imeyile ezikumgangatho osezantsi kunxibelelwano lwexabiso eliphezulu. Siqinisekisa ukuba uthumela i-imeyile kubasebenzisi bokwenyani kwaye ukhusela igama lakho, Ukomeleza umkhankaso wakho we-imeyile, kwaye ugcine imali nge-Emailmarker.
Iikholeji yinkampani yokuqinisekisa i-imeyile. Basusa i-bounces, izoyikiso, abaqhankqalazi, abagwebi, kunye nazo zonke ezinye iingozi ezibonakalayo kwiziko ledatha. IHygienics ibonelela ngexesha langempela API amaqonga asetyenziswa mihla le ngababhalisi kwihlabathi liphela.
Iimpendulo ze-imeyile -Ukugcina uluhlu lwe-imeyile olukhuselekileyo kunye nenkonzo yokuqinisekisa eya kukhuhla, icoce, iqinisekise, kwaye iqinisekise idathabheyisi yakho esele ikho.
ImeyileHippo -Ukuqinisekisa nge-imeyile inkonzo ekwi-Intanethi kubathengisi abaziingcali kunye nabaxhasi babo
Umhloli we-imeyile Ukucoca kunye nokususa iidilesi ze-imeyile ezingasebenziyo kuluhlu lwakho lwentengiso
Uluhlu lwe-imeyile Qinisekisa Uluhlu lwe-imeyile oluqinisekisiweyo luyakukhusela kwizohlwayo ngokunika esona sisombululo siqinisekileyo se-imeyile kwintengiso, uqinisekisa ukuba uluhlu lwakho lwe-imeyile alunasimahla, lusemthethweni kwaye luhambisa i-ROI ephezulu.
Imeyile YoYo Uluhlu lwezinto zokucoca uluhlu lokuqinisekisa.
Isiqinisekiso se-imeyile -I-Byteplant Real-Time ye-Intanethi eyi-Validator unokuqinisekisa ngokulula ukuba ngaba idilesi ye-imeyile ikhona kwaye iyasebenza.
Ifayile: I-Klemail ikuvumela ukuba ukhangele ukuba ii-imeyile ozithumelayo zikhona na. Khusela igama ledomain yakho kwaye wandise izinga lakho lokuvula.
Uluhlu loLumko -Siye sahlalutya iziphumo zamakhulu ezigidi zeedilesi ze-imeyile esizicocileyo ukuyila uluhlu olutsha lwe-imeyile-injini yokucoca enamandla ngakumbi kunangaphambili. Zama uLuhlu loBulumko II simahla kwaye uthathe intengiso yakho ye-imeyile uye nayo kwiindawo eziphakamileyo ezintsha
Ibhokisi lemeyileValidator -Nxibelelana neseva yeposi kwaye ujonge ukuba ibhokisi yeposi ikhona okanye ayikho
Ukuqwalaselwa kwemeyile -Iqinisekisa ii-imeyile kunye neefowuni zisebenzisa iinethiwekhi zentlalo
Iqela leMastersoft -Ijolise kwidatha yase-Australia
Ukuqinisekisa ngokukhawuleza kwe-imeyile -Inkonzo esekwe kwiwebhu yokuqinisekisa iidilesi ze-imeyile ngobuninzi okanye ixesha lokwenyani usebenzisa i-REST API. Bafumanisa ii-imeyile ezingasebenziyo nezingasebenziyo kwaye bakunika ingxelo epheleleyo eneenkcukacha.
I-SiftLogic -Ukuqinisekiswa kwe-imeyile kunye nokufumana amanqaku ukunceda ukubekwa kwebhokisi engenayo kunye nokwandisa igama lomthumeli.
USnovio -Ukufikelela kukuzenzekelayo okuzenzekelayo-fumana, uqinisekise, kunye ne-imeyile ngethemba ngoSnovio ngamaqondo angcono okuguqula.
Truemail -Ukuqinisekisa nge-imeyile. Kulula, kuyakhawuleza kwaye kuyabiza. Coca uluhlu lwakho lokuposa kwaye wandise inqanaba lokuhanjiswa kwakho ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-99. Inkqubo yokuqinisekisa idilesi ye-imeyile ayizange ibe lula kangako.
IVerifalia -I-Verifalia yinkonzo yokuqinisekiswa kwe-imeyile esekwe kwiwebhu ekuvumela ukuba ulayishe kwaye uqinisekise uluhlu lweedilesi ze-imeyile ngokulula nangokulula.
Ukwazisa: Asiluthathi uxanduva kwimpumelelo yakho ekukhetheni omnye waba banikezeli, besifuna nje ukubonelela uluhlu olubanzi kunye nezinye izinto zokuqinisekisa ukuthembela. Sisebenzisa amakhonkco obulungu ngaphakathi kweli nqaku.
tags: Umthetho-OnIphulo eliSebenzayoesebenzayoiieroleadsI-Agile-CrmIiAva-LabsyandisaI-autopilotAWeberBombBombbouncengenangxakiQinisekisabrontoI-Monitor MonitorukhuselekoUphawu lokujongauluhlu olucocekileyococa uluhluCleverreachClickFunnelsIifom CognitoQha ga mshelwanozonxibelelanaGuqula iKitIkhethiweUkuqinisekiswa kwedathaUkuQinisekiswa kweDathai-DEAukuhanjiswaIdilesi ye-imeyile elahlwayoUkufunyanwa kwedilesi ye-imeyileukuthontsizaIikholejiidilesi yemeyileucoceko kwidilesi ye-imeyileiimpendulo ze-imeyileUmhloli we-imeyileUkucoca i-imeyile apiukuhanjiswa kwee-imeyileImvubu ye-imeyileucoceko lwe-imeyileUluhlu lwe-imeyile luqinisekiseUkuqinisekiswa kwe-imeyileisiqinisekiso se-imeyileukuqinisekiswa kwe-imeyileukuqinisekiswa kwe-imeyile apiimeyile yoyoemailhippospamavaIfomdeskiIFomsiteIAdresi entshaI-FulcrumgdprUlawulo lweGetsiteIifom zikaGoogleUnyukela phezuluhubspothubucoNxibelelanaUnxibelelwano-Prongokungacacangaukubekwa ebhokisiniNgqiqoUkukhwelaintercomispI-JotFormimeyile engafunekiyoUkucoca i-imeyile engafunekiyoIbhola ekhatywayoUkukhatywa kwebhola okukhabaimeyileuluhlu lokucocaUluhlu lokucocauluhlu lwezempiloUmgcini wemeyilemailchimpIposiimeyileIposiuphawuMoosendI-NocrmioiphephaNgamandlaubungqinaubungqina bendawoqasIQualarooukuqinisekiswa ngokukhawuleza kwe-imeyileUphando olukhawulezileyoIdwala lokuKhangelaRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321I-RFC 5322 RFC 2821RFC 6531ukuthengisa uxoleloigama lomthumeliThumelaI-SendpulseI-SendxumnathaUlungelelwanisoISmartsurveyegudileyoispemuumgibe wogaxekilespam iidilesi ze-imeyileI-SparkPostyentsimbiUphando-Naphinaiidilesi zethutyana ze-imeyileumgciniingcacisoumziwebUhlobo lohloboa ngafuniqinisekisa uluhlu lwe-imeyilekwiifayileqinisekisa i-imeyileimpendulo ethe nkqoukuphendula ngokuthe nkqoumbono6Wooboxwuuux qinisekisazapperzendeskCRO yeZohoIifom zeZoho
Epreli 25, 2014 ngo-10: 49 AM
Isishwankathelo esihle, Doug. Kubalulekile ukuqaphela, nangona kunjalo, ukuba
ukuphepha kunye nokoyisa iingxaki email ukuhanjiswa kufuna olunzulu
ucoceko lwe-imeyile, ukulungiswa, kunye nenkonzo yokuqinisekisa ngokuchaseneyo nje ne "pinging"
(oko kukuthi iitshekhi zeSMTP) ezibonelelwa ngabathengisi abaninzi abakuluhlu lwakho. Ukukhangela kwe-SMTP kunika kuphela ulwazi kwi
nokuba idilesi ye-imeyile iyahanjiswa ngexesha elithile kunye nokuchaneka kwe
ezi ziphumo zisashiya okuninzi kunqweneleka njengoko ii-ISP ezininzi zenza nantoni na ezinokuyenza
ukunqanda lo mkhuba. Ngaphezu koko, i-bounces ayisiso isibetho se-imeyile
abathengisi njengoko phantse zonke iinkampani ziwela kakuhle ngaphantsi kwemida evumelekileyo
Imiba emikhulu ejongene nayo
Abathengisi be-imeyile baphuma kwiidilesi ze-imeyile ezinengxaki (umz. imigibe ye-spam, iimbiza zobusi,
abakhalazi bespam ezinzima, iidilesi ezingalunganga, njl.njl.) kwiifayile zabo kunye nokungazi
iimpazamo zococeko njengoko ezi dilesi zihanjiswayo zezo Spamhaus kunye
eminye imibutho yokucoca i-spam isebenzisa ukukhupha i-spammers kunye nokukhawuleza kunye
Ukuhlala ngaphandle kweradar ye
imibutho yokucoca i-spam kwaye ngaloo ndlela wandise ukuhanjiswa kwakho kunye
iingeniso, umntu kufuneka asebenze nge-imeyile yococeko, ukulungiswa, kunye nokuqinisekiswa
iidilesi ekungeneni kwisiseko sedatha yakho kwaye ucoce abo banayo
2) Uchwethezo oluchanekileyo kunye
ezinye iimpazamo zokucoceka njengoko i-Spamhaus iye yajika ezininzi ze-typoed eyenziwa rhoqo
iidilesi zibe spamtraps
3) Qinisekisa i
ukuhanjiswa kwedilesi nganye ye-imeyile ngokujonga ngokuchasene ne-imeyile ethile
umsebenzi (umzekelo: ukuvula, ukucofa, ukubhobhoza, izikhalazo zespam, njl. njl.), imbali
ugcino lwe-MX kunye neetshekhi ze-SMTP, kunye neetshekhi ze-SMTP zexesha lokwenyani.
Iindleko zenkonzo engentla
iqala ngepeni ngedilesi ye-imeyile kwaye yehla kakhulu ngevolumu
ukwanda. Ngaphezu koko, ziphephe nayiphi na
umniki-nkonzo onkonzo yakhe ingafumanekiyo ngexesha lokwenyani, ibhetshi ezenzekelayo
(okt 24x7x365), kunye nemowudi yebhetshi yenkonzo epheleleyo, ebandakanya imanyuwali
Ukuba ujonge ukuqinisekisa
Iinzame zakho zentengiso ye-imeyile zifezekisa eyona ROI ingcono ngobuncinci
iindleko, inkathazo, kunye nemingcipheko, ukusebenzisana nenkampani ye-imeyile yococeko kuya kungqina
ukuze ube lolona tyalo-mali luncinci lungcono onokuthi ulwenze.
Ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe malunga nendlela i-25% ye
iinkampani ze-Fortune 100 kunye namawaka abathengisi, abakhulu nabancinci, ba
ukugcina ugcino lwedatha yabo ye-imeyile entsha kwaye isexesheni, yabona http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Okt 8, 2014 ngexesha 2:32 AM
Molo Doug kunye ne-billkaplan,
Ungabona kwakhona http://www.mailboxvalidator.com kwinkonzo yokucoca uluhlu lwe-imeyile.
Mar 20, 2015 ngo 11:55 PM
IWebbula.com yenye inkampani ekufuneka uyijonge. Babonelela ngococeko kunye nokuqinisekisa
Mar 22, 2015 ngo 3:35 PM
Yongeziwe, enkosi Scotty!
Epreli 23, 2015 ngo-4: 46 PM
Enkosi ngeengcebiso, ukuba nabani na ufuna ukufunda ngakumbi ekuthengeni okanye ekucoceni idatabase yabo ye-imeyile yokuthengisa, jonga esi sikhokelo: http://bit.ly/1Ka27Hh
NgoJulayi 26, 2015 ngo-8:19 PM
Ukhe wazama http://www.bulkemailchecker.com ? Ndizame iinkonzo ezimbalwa kuluhlu lwakho kwaye emva kokuba ndingaphantsi kokwaneliseka nokuba ziziphumo okanye ixabiso, ndaqhubeka nokukhangela kwam kwaye ndafumana i-Bulk Email Checker. Ngokunyanisekileyo ndingatsho ukuba ukukhangela kwam umgangatho ophezulu wenkonzo yokuqinisekisa i-imeyile yexabiso eliphantsi iphelile. Bendizisebenzisa kwiinyanga ezi-4 ezidlulileyo kwaye andinakonwaba ngakumbi. Zijonge kwaye ngethemba ungayekisa uphendlo lwakho nawe!
Enkosi Doug, ube nempelaveki emnandi!
NgoJulayi 27, 2015 ngo-12:59 PM
Sep 23, 2015 ngo-3:34 PM
Okwangoku ndikwinkqubo yokukhangela inkampani yokuqinisekisa uluhlu lwam kwaye bendifuna ukufumanisa ukuba kutheni ungonelisekanga ngabanye ababoneleli? Ndimtsha kule nto kwaye kuyandoyisa ukudlula kwiiwebhusayithi ezininzi ukubona ukuba yintoni eyenza zahluke. Ke ukuba unokwabelana ngesizathu sokuba ungonelisekanga nabanye kwaye kutheni ukhetha uMhloli we-imeyile omninzi phezu kwazo zonke ezinye iisayithi. Oku kuya kundinceda kwaye mhlawumbi nabanye abaninzi abafunda oku. Ndiyabona ukuba amaxabiso angcono kakhulu kwiBulk Email Checker kodwa ndingathanda ukwazi ezinye izinto ezinokuthi zizenze zibengcono. Enkosi kwangaphambili ngokuphendula.
Sep 24, 2015 ngo-4:17 PM
Molo Simone, sele kukho imingcipheko enxulumene nokusebenzisa uluhlu oludala okanye uluhlu lokuthenga. Ababoneleli ngenkonzo ye-imeyile, ubukhulu becala, bayayicekisa nayiphi na inkampani engenisa iidilesi ze-imeyile ezingakhange zivavanywe. Kwaye abaBoneleli beNkonzo ye-Intanethi abamkela i-imeyile baya kuyijika yonke i-imeyile yakho okanye bavale umnikezeli wakho ukuba uninzi lwezo dilesi ze-imeyile ziyabhampa okanye zixele i-imeyile njengo-SPAM. Ngenxa yoko, ukusebenzisa isixhobo sokuqinisekisa uluhlu kubalulekile xa uqengqeleka kwiidilesi ze-imeyile zeedilesi ezifanelekileyo ze-imeyile. Ukuba usebenzisa isixhobo esingalunganga, uzibeka emngciphekweni wokuvalelwa yi-ISP kwaye ukhatywe ngaphandle komnikezeli wenkonzo ye-imeyile.
Sep 1, 2015 ngo-11:27 PM
Enkosi ngoluhlu!! Ndinombuzo. Ndifuna ukuqalisa eyam inkonzo yokucoca i-imeyile. Ngaba unokucebisa nayiphi na isoftware elungileyo onokuyithenga. Ndikhangele ngethamsanqa okwangoku. Ndiyifuna i-automation kangangoko. enkosi
Sep 2, 2015 kwi-10: 40 AM
Molo Josh, andazi nayiphi na i-off-hand, kodwa mhlawumbi enye yeenkonzo ezidweliswe apha ine-API okanye inikezela ngesisombululo se-White Label. Oko kuya kukuvumela ukuba uphawule isisombululo njengesakho.
Sep 16, 2015 kwi-3: 26 AM
Indlela elula yokujonga idilesi yemeyile yedatabase, Eyona mkhangeli imeyile iphambili. Ubungqina.io.
Sikuvavanyo lwe-beta ngoku kodwa sineyona ndlela ichanekileyo yovavanyo.
Sifuna impendulo. Unokufumana ukubonelela ngesixa esithile ukuvavanya inkonzo.
Sep 17, 2015 ngo-1:20 PM
Sazise xa uphumile kwi-beta kwaye sizakukongeza kuluhlu lwababoneleli!
Oktobha 13, 2015 ngo-2: 35 PM
Ndivele ndaya kwindawo yakho ukuvavanya iinkonzo zakho nangona kunjalo - akukho nombolo yefowuni. Akunakwenzeka ukuba nabani na afake uluhlu lwababhalisi kwindawo yakho ngaphandle kokuchukumisa isiseko nomphathi weakhawunti okanye umntu oqinisekisa ukuba andinikezi nje ababhalisile bam kumthombo ongaziwayo.
Oktobha 13, 2015 ngo-4: 58 PM
Ukuba ucofa kwi-Powered by Neverbounce, uya kubona inombolo yefowuni yabo kwibha yokukhangela.
Nov 5, 2015 ngo-7:27 AM
Hayi Douglas. Ndimangalisiwe kukuba ungakhange uyikhankanye iVerifalia kuluhlu lwakho. Ayibonakali nje ingomnye wababoneleli bokuqinisekisa i-imeyile eYurophu kodwa banikezela ngeempawu ezizodwa endingazange ndibone naphi na kwenye indawo, kubandakanya inkxaso yeedilesi ze-imeyile ezingasebenzisi ialfabhethi yesiLatini (sinabathengi abaninzi kwizintlu zethu ukusuka ISingapore, iJapan kunye neSaudi Arabia, umzekelo), kunye nokukwazi ukwenza ungqinisiso olunzulu oluthatha ukudlula okuninzi, ukuqinisekisa iidilesi ze-imeyile ezinemiba yethutyana efana nebhokisi yeposi ngaphezulu kwequota okanye uluhlu olungwevu. Lo mboneleli ukwabhengeza i-RESTful ye-imeyile yokuqinisekisa i-API kubaphuhlisi besoftware kunye namathala eencwadi eelwimi eziphambili zenkqubo kunye namaqonga... Kwaye bakwanaso nesicwangciso saSimahla esiza nokuya kuthi ga kwi-125 yesiqinisekiso se-imeyile sasimahla ngosuku.
Nov 5, 2015 ngo-7:07 PM
Enkosi – songeze iVerifalia kuluhlu!
Nov 25, 2015 ngo-4:56 PM
kwaye enkosi ngale post 🙂
Mar 15, 2016 ngo 4:43 PM
Ndisebenzise ezinye zeengcebiso kule bhlog ukukhetha inkonzo yokuqinisekisa uluhlu lwe-imeyile. Ndigqibele ndihamba nge-imeyilelistverify.com, kwaye ngelixa ndonwabile kunye nabo kuluhlu lwam lokuqala, lonke uluhlu olulandelayo endiye ndazama ukuluqhuba kwinkonzo yabo luye lwaba yingxaki, ubukhulu becala kuba andinako ukukhuphela uluhlu lwabacocekileyo. imeyile emva koko. Yintoni injongo yokusebenzisa inkonzo yabo ukuba andifumani ukuba zeziphi iidilesi ze-imeyile ezisebenzayo? Ngaphandle koko, inkxaso yabo ayiphenduli kakhulu kwaye abaxakekanga ngokugcina abathengi.
Mar 15, 2016 ngo 5:55 PM
Sibenethamsanqa elikhulu no-Neverbounce… kangangokuba siye sasebenzisana nabo.
Epreli 23, 2016 ngo-7: 41 AM
ndifuna inkonzo yasimahla okanye isoftware…. ingaba ikhona?!
Epreli 23, 2016 ngo-8: 44 PM
Epreli 25, 2016 ngo-7: 34 AM
Isithuba esihle! Bendizibuza nje ukuba ndingadibanisa inkonzo enje nge GetResponse?
Epreli 25, 2016 ngo-7: 01 PM
Andrea, ndiyakholwa njalo. Ndicinga ukuba indlela yokwenza kukuba ifomu yakho isebenze kunye ne-API yenkampani yokuqinisekisa. Nje ukuba i-imeyile ibuyiselwe njengoko iqinisekisiwe, emva koko ungayityhala kwi-GetResponse.
Jul 9, 2016 ngo-1: 21 AM
Ndisebenzisa ngoku https://www.emailverifierapi.com/ ukuqinisekisa iidilesi ze-imeyile ngethamsanqa 500 yenkampani email marketing isicelo. Andinazikhalazo njengoko umgangatho wenkonzo ugqibelele, nangona kunjalo sijonge enye indleko ephantsi enika umgangatho ofanayo. Ngaba ungacebisa enye iapi yebakala leshishini enokusetyenziswa? "Ibakala loshishino" ligama elingundoqo. Enkosi ngoncedo lwakho!
NgoJulayi 12, 2016 ngo-5:58 PM
Ndiyathemba, wenza kakuhle, ukukuhlaziya nje, Siqhuba inkqubo yethu yokuqinisekisa i-imeyile.
apho awudingi ukuchitha imali yakho eninzi. Ndiya kuvuya ngakumbi kukuphendula malunga nenkqubo yethu Indlela esisebenza ngayo ngokwenene.
Sifumana uluhlu kubathengi abafuna ukuqinisekisa ii-imeyile, emva koko sabiza umamkeli okanye uMphathi Jikelele wenkampani emva koko siqokelela ii-imeyile zabo eziSebenzayo,
ngokwenza ngale ndlela emva kweentsuku ezili-15 siyijonga ngenkqubo yethu yokuqinisekisa i-imeyile esiyenzayo Eblast.
Ukuba nabani na unokubhideka okanye umbuzo malunga noku malunga neendleko.
Zive ukhululekile ukusibhalela siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza
Okt 25, 2016 ngexesha 8:26 AM
Enkosi ngenqaku! Bendisebenzisa i-proofy.io kwaye ndonwabile ngayo. Ixabiso ngobulumko ayibizi kakhulu ukuba abanye kwaye ukuya kuthi ga ngokomgangatho kunye nesantya.
Okt 25, 2016 ngexesha 8:47 AM
enkosi kakhulu ngeProofy.io
Ngomhla wama-2 ku-Disemba 2016 ngo-4: 37 AM
I-Proofy.io yinkampani yobuqhophololo. Inkonzo ayisebenzi. Ndihlawule iitshekhi eziyi-10000, ndafaka uluhlu lwam lwee-imeyile ezingama-4000 kwaye ibiyi “Processing” kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo. ebizwa Roman (okwanguye mhlawumbi umnini site) kunye nomhlobo wakhe Anna. Andifumananga olunye uphononongo oluthembekileyo kwaye bekungafanelanga ukuba ndibanike imali njengoko ngoku bathe cwaka ngokupheleleyo. Bakhankanye into "ngomdwelisi wenkqubo osebenza kumncedisi ngoku" kodwa ukususela ngoko - akukho nxibelelwano kwaye akukho mali. UNGASEBENZISI proofy.io!!!
Dec 20, 2016 ngo-10:00 PM
Enkosi ngeengcebiso! iingcebiso ezoyikekayo.
Jan 9, 2017 kwi-5: 58 AM
Sijonge inkampani enokunika uxwebhu oluvunyiweyo ngokusemthethweni malunga nokuba iidilesi ze-imeyile eziqinisekisiweyo zinyanisekile kwaye zijongiwe.
Ngaba uyayazi inkampani enjalo?
Jan 9, 2017 kwi-11: 30 AM
Andiqinisekanga ukuba nabani na unokubonelela ngesiqinisekiso esisemthethweni kuba abantu bayayeka ukusebenzisa ii-imeyile kwaye batshintshe iidilesi ze-imeyile yonke imihla. Okona kulungileyo liqonga elizama ukubamba utshintsho lwedilesi ye-imeyile kwaye uluhlu lwakho lunokucocwa ngokuchasene noko.
NgoJanuwari 11, 2017 ngo-11:07 PM
"Into ehlekisayo, ngokoluvo lwam, kukuba ndikholelwa ukuba kulula ku-SPAMMER ukufumana i-imeyile kwi-inbox yakho kunenkampani eqhelekileyo ethumela umyalezo osebenzayo."
Mhlawumbi ulungile kule nto, kodwa kungenxa yokuba ngokubanzi amashishini akasebenzisi ukuthengisa nge-imeyile ngokuchanekileyo, okanye rhoqo ngokwaneleyo ukuba uluhlu lwawo lusebenziseke ngakumbi kwaye bafunde ezona zenzo zibalaseleyo. Bona (wonke umntu) kufuneka bathumele i-imeyile rhoqo.
Kodwa malunga noluhlu lwezixhobo… intle!
NgoJanuwari 11, 2017 ngo-11:09 PM
Siza kulandela esi sithuba ngodliwanondlebe olukhulu lwepodcast kunye ne-CEO ye-Neverbounce, u-Oscar. Hla umamele!
Jan 20, 2017 kwi-3: 20 AM
Ndicinga ukuba akukho ndlela yokuqinisekisa i-imeyile yakho nje ukuba i-acc yakho yenziwe. Ke ndicinga ukuba kufuneka wenze oku xa usenza i-acc yakho kwinqanaba lokuqala.
Edward Uluhlu lwemeyile
Mar 28, 2017 ngo-11: 55 AM
Inqaku elimangalisayo. Ngaba ndingazi ukuba uqhube iWebinar kunye ne-CEO ye-Neverbounce, Oscar?
Epreli 24, 2017 ngo-4: 47 PM
Ndikhangela ulwazi malunga nokuqinisekisa iidilesi ze-imeyile ngexesha lokwenyani njengoko umthengi omtsha esiza kwinkampani yam. Ngaba loo software/iteknoloji iyafumaneka ukuze ndongeze kwisoftware yethu yangoku? Okanye ngaba kuya kufuneka sitshintshe kuyo yonke isoftware yethu yangoku? Kakhulu sinengxaki yeqela lethu lokuchwetheza kwiidilesi ze-imeyile zabathengi ngokungalunganga okanye umthengi wenza njalo. Ndingathanda ukuyimisa kwindawo yokuthenga endaweni yokuba uluhlu lucocwe emva koko sibambe idilesi ye-imeyile embi endaweni yokufikelela kumthengi wethu.
Aug 29, 2017 ngo-12:24 PM
ukuba ujonge ukuqinisekiswa kwexesha lokwenyani le-imeyile, thetha nabafana kwi-imeyilichecker.com, ndinamava okuqala okusebenzisa isisombululo sabo sexesha lokwenyani kwaye inkulu kwaye ichanekile!
Juni 27, 2017 ngo-10: 36 PM
Molo Douglas, Umdibaniso olungileyo apho. Ndiziva ngathi uphoswe ngumdlali omkhulu- http://www.emailverifierapp.com Nceda uyijonge. Enkosi
Aug 29, 2017 ngo-12:22 PM
Inqaku elihle likaDoug linolwazi kakhulu kunye namagqabantshintshi amnandi, Siqhuba inkampani ekhokelayo kwaye sinamaphepha amaninzi acudisayo kwiwebhu kubathengi kwaye siqokelela amawaka ambalwa e-imeyile ngosuku! siye sasebenzisa iinkampani ezimbalwa kodwa sagqiba kwelokuba sibuyele kwinkampani yethu yokuqala esiyivavanye nayo (inkampani ebizwa ngokuba yi-Email Checker) njengoko ifumanise ukuba isoftware yabo yeyona ichanekileyo kwaye ithembekile. Sisebenzisa i-API yabo kumaphepha ethu acudiweyo kwaye sisixhobo esihle kuthi kwaye sithandwa kakhulu ngabathengi bethu, babonelela ngoqinisekiso oluninzi kwaye sisebenzisa ifom esetyenzisiweyo ixesha nexesha kodwa sisebenzisa i-API yabo yonke imihla ngeziphumo ezintle. Ngapha koko, bendifuna nje ukwabelana ngamava am njengoko ndiyazi ukuba kukho ukhuphiswano oluninzi phaya, nika abafana kwi-imeyile echecker ukuba iwebhusayithi yabo http://www.emailchecker.com kwaye ubaxelele ukuba uJohn Morgan ukuthumele 🙂
Oktobha 15, 2017 ngo-4: 14 PM
Ndonwabile ukhankanye umahluko phakathi kokuqinisekiswa kunye nokuqinisekiswa. Ngaba sinokongeza i-meychechecker.com kuluhlu?
Okt 27, 2017 ngexesha 9:39 AM
Oktobha 28, 2018 ngo-12: 53 PM
Nasi esinye isixhobo esiluncedo endifuna ukusicebisa: https://debounce.io
Ungayongeza oku kuluhlu lwakho?
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2018 ngo-7: 59 AM
Songeze i-DeBounce, enkosi!
Ufuna ukucebisa enye insiza yokuqinisekisa i-imeyile - https://mailcheck.co
Bathumela ngakumbi kwiiprofayile zentlalo eziqhagamshelwe kwi-imeyile, ngaphantsi kwiitshekhi ezithe ngqo ze-smtp. Ivumela ukufumana ulwazi oluthe kratya kunye nokumisela ukuba umnini we-imeyile usebenza kwi-gravatar, i-gmail, njl.
Agasti 6, 2019 kwi-10: 18 AM
Ndingasongeza esinye isixhobo esikhulu kolu luhlu?
I-Truemail (https://truemail.io/) sisixhobo esikhulu sokuqinisekisa nge-imeyile.
Ichanekile kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa. Iya kucoca ngokukhawuleza uluhlu lwakho kwiidilesi ze-imeyile ezingasebenziyo neziyingozi.
Ngendlela, ine-1,000 yokuqinisekisa i-imeyile yasimahla rhoqo ngenyanga.
Aug 6, 2019 ngo-1:07 PM
Enkosi Alona! Ndibongeze kolunye uluhlu njengoko befihla ilizwe labo lemvelaphi kwaye babe nedatha yabo ye-whois eyimfihlo.
Meyi 24, 2020 kwi-5: 50 PM
Unokuqinisekisa ii-imeyile ngale nkonzo yasimahla yokuqinisekisa: https://www.emailverified.org
Nov 14, 2020 ngo-5:06 AM
Molo Doug, iyamangalisa indlela oye waligcina ngayo inqaku lihlaziywa kule minyaka imbalwa idlulileyo nababoneleli benkonzo abatsha, ndiyawuncoma umzamo. Ndingathanda ukucebisa uAntideo ukuba yongezwe kuluhlu, yenye yezona nkonzo zifikelelekayo phaya. Inqanaba lasimahla elibonelela ngaphezulu kwe-5000 yokuqinisekisa uhlolo ngenyanga lingaphezulu kokwaneleyo kwishishini elincinci, ngoko ungakuxabisa kakhulu ukuba unokujonga le nkonzo (www.antideo.com) kwaye usibandakanye kuluhlu lwakho ukuba uyasibona. kufanelekile.
Nov 18, 2020 ngo-4:41 PM
Enkosi, ndongeze kuluhlu. Inqaku elinye elisecaleni, kubonakala ngathi indawo yenkampani yomzali wakho iphantsi.